Sweden Xeerar Cusub oo ku Saabsan Baaritaanka Corona oo lasoo saaray
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden Xeerar Cusub oo ku Saabsan Baaritaanka Corona oo lasoo saaray
November 22, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Photo: Lars Wallin/DK
Laga bilaabo Isniinta 22ka Nofeembar, Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha Iswiidhan waxay adkeyn doontaa talooyinka ku saabsan baaritaanka coronavirus mar labaad. Tani waxay khusaysaa qof kasta oo ka muuqda calaamadaha Corona
1. Maxaa dhacaya haddii aan xanuun dareemo?
Laga bilaabo Isniinta, Noofembar 22, qof kasta oo jira 6 sano iyo ka weyn oo leh calaamadaha COVID-19 waa in la baaro oo guriga joogo. Tani waxay sidoo kale khusaysaa dadka la tallaalay ama hore u qaaday cudurka. Inta aad sugayso baaritaanka, ama natiijada baaritaanka, u dhaqan sidii adigoo COVID-19 qabo.
Hay’adda caafimaadka dadwaynaha Iswiidhan waxay sidoo kale ku talinaysaa in dadka, xitaa aan lahayn calaamadaha, la baaro marka xubin qoyska ka mid ah uu u bukoodo COVID-19.
Carruurta aan dugsiga gaarin waxaa lagula talinayaa inay guriga joogaan haddii ay isku arkaan astaamo, iyadoo aan la baarin. Dadka laga helay covid-19 lixdii bilood ee la soo dhaafay waa laga dhaafay shuruuda ah inay is baaraan.
Waxa kale oo lagu talinayaa in dadka leh calaamadaha caabuqyada neef-mareenka ay joogaan guriga, si aanay u faafin fayraska RS-ga, tusaale ahaan.
2. Baaritaanka aad sameeneyso
Waxaa jira laba nooc oo baaritaanno ah oo lagu ogaanayo infekshanka coronavirus: baaritaanka PCR-ka iyo baaritaanka antigenest. Hay’adda caafimaadka dadwaynaha Iswiidhan waxay ku talinaysaa baaritaanka PCR-ka, oo ay sameeyaan daryeelka caafimaadka, laakiin sidoo kale waxay sheegeen in tijaabada antigenest-ka fudud ee ugu dhaqsaha badan loo isticmaali karo “marka jawaabaha degdega ah loo baahdo”.